uMandela ubingelela abamfisela izilokotho ezinhle ngaphandle kweSinagoge ePitoli
uMandela ubingelela abamfisela izilokotho ezinhe ngaphandle kwasinagoge ePitoli.
Izishoshovu ezahlukane zepolitiki, kubalwa kuzo noNelson Mandela owayengummeli ngaleso sikhathi bama bebekwe icala lokuvukela umbuso ngeminyaka yo 1950’s yesikhathi sobandlululo. Lezi zishoshovu okubalwa kuzo noMandela, Ruth First, Z.K. Mathews no Lionel "Rusty" Bernstein babhala baphinde basingatha Usomqulu weNkululeko owawukhuluma ngamandla abantu base Ningizimu Afrika abanawo. Uhulumeni wobandlululo wabe esehlela itulo lokugasela kulezizishoshovu nokwaholela kwicala Lokuvukela Umbuso ngo 1956 nelathatha iminyaka engu 11. Ngo 1961 bonke laba ababebekwe icala batholakala bemsulwa base bekhululwa.
“Kungemfundo kuphela ukuba indodakazi yomfokazana ingaba ngudokotela, ukuthi indodana yomsebenzimgodini ingaba inhloko yemayini." ~ Nelson Mandela